Jungle Hilltop Residence phezu koLwandle Andaman
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNga
I-Ocean Hill likhaya lehlathi elijonge kulwandle lwase-Andaman, kumgama oziimitha ezingama-700 kuphela. Le yindalo entle yasendle ene-Hornbill ehamba phezu kwemithi, amaxhalanga olwandle abhabha, iinkawu zivuna iziqhamo ekupheleni kwehlathi, kunye namatye olwandle agwetywe ngamanzi amhlophe echwebeni. Ebusuku iicicada kunye neqakamba zivakala phantsi kwesibhakabhaka esicacileyo esizaliswe ziinkwenkwezi. Imizuzu kude ziindlela zaselwandle ezizele ziindawo zokutyela zasezilalini kunye nezibane ezikhanyayo zeekhefi zedriftwood. I-Koh Phayam iselilitye elinqabileyo elingaphuhliswanga.
Isilumkiso: Indawo yam yokuhlala eOcean Hill ikwinduli yehlathi. Indlela esuka kuhola wendlela ngumzila womhlaba oziimitha ezingama-900 kunye nethambeka lokunyuka nokuhla kwenduli. Ndingumfazi omncinci kakhulu onesithuthuthu, kwaye indlela ayiyongxaki kum. Kodwa ukuba awuwathembi amandla akho okuphatha isithuthuthu, le isenokungabi yeyona ndawo ilungileyo kuwe.
Kukwakho nomnqantsa oziimitha ezingama-50 ohamba ngekonkrithi ukuya kwindawo yokupaka. Indawo yokupaka iyafumaneka apha ngezantsi kuye nabani na ongathanda ukunyuka.
I-Koh Phayam incinci ngokumangalisayo kwaye imnandi ukuyihlola. Esi siqithi sahluke ngokweendawo ngokweendawo, sineentaba ezinamanxweme afihliweyo, iintlambo, iifama kunye neendlela zamahlathi ezizezithuthuthu kuphela. Akukho zimoto esiqithini. Uninzi lweekhefi zantlandlolo zazakhiwe kwi-driftwood ngabaseThais abancinci kunye nabasentshona abahambahambayo. Yindlela yokuphila yelali yasesiqithini enendalo entle. Uninzi lwesi siqithi yiPaki yeSizwe, enethambeka lehlathi elingangenekiyo elijikeleze okanye elihlayo ukuya nakweliphi na isiphelo sonxweme. I-Koh Phayam ibekwe njengenye yezona ziqithi zihle eThailand.
Umbuki zindwendwe ngu- Nga
Ndihlala ndifumaneka apha eOcean Hill, kwaye ndihlala ndinxibelelana ngefowuni.